ငါတို့အတော်များများ footfall ကောင်တာမူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ plagiarism ကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အကြောင်းအရာသိပ်မထည့်ခဲ့ပါ။ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်ထံပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းများကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် footfall ကောင်တာ.
ငါတို့အဲဒါသုံးတယ် footfall ကောင်တာစာကြည့်တိုက်များ၊ ပြတိုက်များ၊ သာယာလှပသောနေရာများ၊ ကွင်းဆက်စတိုးဆိုင်များ၊ စူပါမားကက်များနှင့်အိမ်နှင့်ပြည်ပရှိအခြားနေရာများအတွက်လျင်မြန်စွာဖြန့်ကျက်ပြီးရိုးရှင်း။ အကျိုးရှိစွာခြေဖြင့်ရေတွက်နိုင်သောအဖြေပေးနိုင်ရန်အာရုံခံကိရိယာ။ ဒါfootfall ကောင်တာ အလိုအလျောက်ထေိုထိန်းချုပ်မှုအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
HPC015S footfall ကောင်တာ အလွန်သေးငယ်သော၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံး၊ WIFI မှကူးစက်သောခရီးသည်စီးဆင်းမှုကောင်တာဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာတစ်မျိုးတည်းသာဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ဖန်သားပြင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အချိန်မှန်မှာ update လုပ်။ အခြားကုန်ကျစရိတ်များမလိုအပ်ပါ။ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုစနစ် (သို့) သီးခြားရပ်တည်နိုင်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ footfall ရေတွက်စက် networking mode ကိုအသုံးပြုသည် footfall ကောင်တာWIFI-AP network hotspot နှင့် built-in WEB ၀ န်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ မည်သည့်စမတ်ဖုန်း (Android, IOS) မှ ဆက်သွယ်၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးပါကခရီးသည်စီးဆင်းမှုရေတွက်သည့် terminal ၏အချက်အလက်များကိုသတ်မှတ်ရန်သို့မဟုတ်အချက်အလက်များကိုလှန်လှောရန် WEB စာမျက်နှာကိုသုံးပါ၊ သို့မဟုတ် function ကို extension များ။
Footfall sensor သည်ခရီးသည်စီးဆင်းမှုမှတ်တမ်းကိုသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလနှင့်အညီသိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ သတ်မှတ်ထားသောကာလအရခရီးသည်စီးဆင်းမှုမှတ်တမ်းကိုသတ်မှတ်ထားသောဆာဗာသို့ပုံမှန်တင်နိုင်သည်။
Footfall ကောင်တာ ထို့အပြင်အလယ်အလတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုရန်အပြည့်အ ၀ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ footfall ရေတွက်စက်ဆက်သွယ်ရေး protocol နှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အမျိုးမျိုးသော data docking နည်းလမ်းများ။ ချောမွေ့ပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် platform သည်ကျွမ်းကျင်သောဆာဗာများကိုအသုံးပြုသည်။ အချက်အလက်ပြည့်စုံမှုကိုသေချာစေရန်လွတ်လပ်သောဒေတာသိမ်းဆည်းသည့်ဆာဗာကိုအသုံးပြုသည်။
ဆက်သွယ်မှု ကြိုးမဲ့, Wifi module ကိုထောက်ခံမှု
ထောက်လှမ်းအကျယ် ၁-၂၀ မီတာ
ဘက်ထရီ ၁.၅ နှစ်အထိ (နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ထားသောဘက်ထရီ)
အဘယ်ကြောင့် MRB footfall ကောင်တာကိုရွေးချယ်ပါ?
၁။ ခရီးသည်စီးဆင်းမှုအချက်အလက်များပြောင်းလဲမှုအရ၊ footfall ကောင်တာအထူးနေရာများနှင့်အထူးကာလများကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးမလိုအပ်သောပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးတို့ကိုထိရောက်စွာစီစဉ်နိုင်သည်။
2. အဓိကတွက်ချက်သည့်နေရာတွင်ခရီးသည်စီးဆင်းမှု footfall အာရုံခံကိရိယာ တစ်ခုလုံးကိုofရိယာ၏ဘက်ပေါင်းစုံ layout ကိုများအတွက်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံပေးပါသည်။
အတွက်ဒေတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့် 4. footfall ကောင်တာတန်ပြန်ဆိုင်ငှားရမ်းခ၏စျေးနှုန်းကိုဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျဆုံးဖြတ်ခြင်း။
၇ footfall အာရုံခံကိရိယာ, ခရီးသည်စီးဆင်းမှု၏ပျမ်းမျှအသုံးစရိတ်စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်တည်နေရာများအတွက်ရည်ညွှန်းပေးတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
၈ footfall ရေတွက်စက်, စီးပွားရေးနာရီကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သတ်မှတ်နိုင်သည်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ရေတွက်ခြင်းနိယာမ - အခန်းကန့်နည်းပညာ၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်။
ဒေတာများကိုတင်ပို့သည့်နည်းလမ်း - WIFI မှတစ်ဆင့် cloud server သို့ data upload တင်ခြင်း။
ဒေတာပြသမှု: OLED မျက်နှာပြင်ကြီးသည်တစ်နေ့တာ၏ ၀ င်ရောက်မှုနှင့်ထွက်ပေါက်ဒေတာများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖော်ပြပေးသည်။
Detection width: ၁-၁၀ မီတာအတွင်း၊ အပြင်ဘက် ၁-၁၆ မီတာ။
ရေတွက်နည်း - ခရီးသည်စီးဆင်းမှုနှင့်ထွက်ပေါက်အရေအတွက်ကိုသီးခြားတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
ဒေတာကြည့်ရှုခြင်းနည်းလမ်း - ဝက်ဘ်စာမျက်နှာထဲသို့ ၀ င်ရန်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ URL ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ ကြည့်ရှုရန်အကောင့်အမည်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို log in ဝင်ပါ၊ သင်ကြည့်ရှုရန်အချိန်ကာလအမျိုးမျိုး၏ဒေတာများကိုရယူနိုင်သည်။
တပ်ဆင်သည့်နည်းလမ်း - အနီအောက်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှင့်စက်နှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်လက်ခံကိရိယာကိုနှစ်ဖက်စလုံးမှတူညီသောအမြင့်တွင်တပ်ဆင်ပါ၊ အလယ်တွင်အတားအဆီးများကိုရှောင်ပါ။
Power supply mode: USD power supply၊ အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် lithium battery power supply (အားသွင်းပြီးနောက် ၃ လခန့်ကြာအောင်အသုံးပြုနိုင်သည်) ။
ကွဲပြားခြားနားသောစတိုးဆိုင်များ၏စက်ပစ္စည်းအချက်အလက်များကိုအကောင့်တစ်ခုတည်းတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ဒေတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
နေရာထိုင်ခင်းထိန်းချုပ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည် footfall ကောင်တာ ဆော့ဝဲ။
HPC015S Footfall တန်ပြန်ဗီဒီယို
ကျွန်တော်တို့မှာ IR အမျိုးအစားများစွာရှိသည် footfall ကောင်တာ, 2D, 3D, AI အ footfall ကောင်တာ, သင်နှင့်ကိုက်ညီမည့်တစ်ခုအမြဲရှိသည်, ကျေးဇူးပြု။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ငါတို့အသင့်တော်ဆုံးအကြံပြုလိမ့်မည် footfall ကောင်တာ 24 နာရီအတွင်းသင်တို့အဘို့။
ရှေ့သို့ လက်လီ HPC015U အတွက် MRB USB ရေတွက်စက်
နောက်တစ်ခု: MRB ကြိုးမဲ့ဒီဂျစ်တယ်သမားများသည် HPC005U ကိုတန်ပြန်သည်